Himalaya Dainik » पूर्णिका शाह भन्छिन्- मैले आफ्नो ‘ड्रिम ब्वाइ’ भेटिसकेँ
पूर्णिका शाह भन्छिन्- मैले आफ्नो ‘ड्रिम ब्वाइ’ भेटिसकेँ
राजतन्त्र ढलेपछि आम नागरिकमा परिणत भएको पूर्वराजपरिवारप्रति अहिले पनि जनचासो उत्तिकै छ । पछिल्लो समय युवा पुस्तामा चर्चा कमाइरहेकी पूर्वराजपरिवार सदस्य हुन् पूर्णिका शाह ।
पूर्वयुवराज पारस र युवराज्ञी हिमानीकी जेठी छोरी पूर्णिका अहिले अध्ययनका क्रममा थाइल्यान्डमा छिन् । इन्टरनेसनल बिजनेसमा स्नातक अध्ययनरत उनी सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो तस्वीर र स्टाटसहरु अपडेट गरिरहन्छिन् ।
१९ वर्षमा हिँडिरहेकी पूर्णिका अहिले धेरै कुरा बुझ्ने भइसकिन् । पूर्णिकाले हालै फलोअर्सहरुसँगको अन्तरक्रियामा आफ्नो निजी जीवनका केही रहस्योद्घाटन गरिन् । उनले आफू प्रेममा रहेको संकेत गरेकी छन् ।
‘qooh.me’ नामक वेवसाइटमा अकाउन्ट खोलेकी पूर्णिकाले त्यहाँ प्रश्नकर्ताहरुका ४८ वटा प्रश्नको जवाफ दिएकी छन् । यो यस्तो वेवसाइट हो, जसमा व्यक्तिका निजी जीवनसँग सम्वन्धित वा अरु विषयमा जे पनि प्रश्न सोध्न सकिन्छ ।
पूर्णिकाले जवाफ दिएकी छन्, ‘मलाई लाग्छ, मैले आफ्नो ड्रिम ब्वाइ भेटिसकेँ ।’
पूर्णिकालाई एउटा नमिठो प्रश्न पनि सोधिएको छ ।
‘तपाईंका बुवा र हजुरबुवाले वीरेन्द्रको सम्पूर्ण परिवारको ह’त्या किन गरे ?’ एकजनाले सोधे ।
त्यसलाई पूर्णिकाले जवाफ फर्काएकी छन्, ‘यदि तपाईंलाई यो कुरा साँचो लाग्छ भने मलाई किन फलो गर्नुहुन्छ ?’
पढाइ सिध्याएपछि सधैंका लागि नेपाल फर्किने उनको भनाइ छ । साथै भविष्यमा कुनै आध्यात्मिक कर्ममा संलग्न हुने योजना पनि उनले सुनाएकी छन् ।
पूर्णिकासँगका अन्य केही रमाइला प्रश्नोत्तर :
प्रश्न : धेरै नेपाली केटीहरु तपाईंका भाई हृदयन्द्रप्रति हुरुक्क हुन्छन् । उनको बारेमा टिकटक भिडियो बनाउँछन्, दिउँसै सपना देख्छन्, आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर परिवर्तन गर्छन् । उनीहरुलाई तपाईंको सन्देश के छ ?
प्रश्न : तपाईंको सबैभन्दा ठूलो शक्ति के हो र तपाईं तनाव र दबावलाई कसरी सामना गर्नुहुन्छ ?
पूर्णिका : मेरी आमा नै मेरो सबैभन्दा ठूलो शक्ति हुनुहुन्छ । उहाँले सँधै मलाई राम्रो मान्छे बन्नलाई प्रोत्साहन गर्नुभयो ।
प्रश्न : तपाईंले कहिल्यै कसैलाई थप्पड हान्नुभएको छ ?
पूर्णिका : अँ, हानेकी छु ।
प्रश्न : तपाईं आफ्ना भाई बहिनीसँग कत्तिको झ’गडा गर्नुहुन्छ ?
पूर्णिका : हामी त कुकुर र बिरालो जस्तै झगडा गरिरहन्छौं ।
प्रश्न : तपाईंले आफ्नो भाईका फ्यानगर्लहरुको टिकटक हेर्नुभएको छ ?
पूर्णिका : हेरेको छु । ‘क्यूट’ छ ।
पूर्णिका : अहिले होइन । भविश्यमा हुन्छु होला ।
पूर्णिका : उनीहरुको हृदय कोमल छ ।
प्रश्न : मैले तपाईंका बारेमा दुईवटा कुरा सुनेको छु । तपार्इंले संस्कृत पढ्नुभएको छ र तपाईं नेपाली भाषामा राम्रा कविता लेख्नुहुन्छ । यी कुरा सत्य हुन् ?